Greenwashing, "girinhi" yekushambadzira tsika | Bezzia
Maria vazquez | 14/05/2022 10:00 | Nhau
Iwe uri kushandura maitiro ako ekushandisa kune mamwe anogadzikana? Pamwe munzira iwe uchave nekusahadzika kwakawanda kune chekuita nehuchokwadi hweizvo izvo zvinyorwa zveichi kana icho chigadzirwa zvinoedza kukutengesera. Uye kuti zviri nyore kuva akabatwa negreenwashing.
Makambani haaiti nguva dzose kutamba zvakanaka mune avo maitiro ekudhinda. Zvimwe zvidzidzo zvinoti 4,8 chete yezvigadzirwa zvinotsanangurwa se "girinhi" zvinonyatso pindura kune hunhu. Nzira yekuziva sei uye kuita zvinopesana negreenwashing?
1 Chii chinonzi Greenwashing?
2 Ungazviona sei?
2.1 Mhan'ara hutsotsi
Chii chinonzi Greenwashing?
Ngatitangei pakutanga. Chii chinonzi greenwashing? Muchidimbu, tinogona kutaura kuti i green marketing practice zvakatemerwa kugadzira mufananidzo wekunyepedzera wemutoro wezvakatipoteredza, zvichitora mukana wekusagadzikana uye hunhu hwevanhu vanonyanya kushandisa masevhisi aya kana zvigadzirwa.
Izwi rinobva kuEnglish green (green) nekuwacha (kuwacha), harisi idzva. Maererano neEncyclopedia yeCorporate Social Responsibility, yaive iyo nyanzvi yezvakatipoteredza Jay Westerveld uyo akagadzira izwi iri muchinyorwa cha1986, ndokuzoreva indasitiri yemahotera.
Iyo inozivikanwawo se eco whitening, ecological washing kana eco imposture, greenwashing kutsausa veruzhinji, inosimbisa magwaro ezvakatipoteredza ekambani, munhu kana chigadzirwa kana izvi zvisingakoshi kana zvisina musoro.
Iyi tsika yakaipa iyo makambani mazhinji anoshandisa nhasi kuti achenese chifananidzo chavo uye awane vatengi ane mhedzisiro yakakosha ine kukanganisa kwakashata kumutengi, musika uye, hongu, zvakatipoteredza.
kutungamirira kukukanganisa kwekuona mumutengi uye kutora mukana wechishuwo chemutengi kuvaka tsika yakanaka yezvakatipoteredza.
Kwete chete iyo yakashambadzirwa inobatsira haiitike, asi inogadzira kukanganisa kukurukana nekuwedzera kushandiswa.
Zvinokuvadza kune mamwe makambani, nekuti zvinotungamirira kumakwikwi asina kururama, isingaenderane nebasa rekambani.
Kuti udzivise greenwashing, unofanirwa kuziva kuti ungaizivisa sei. Ndeapi marongero anoshandiswa nemakambani kuburitsa iyi maonero eecology mutoro kana kusimudzira? Kuaziva kuchatibatsira kuti tinyatsoteerera uye tingwarire mamwe mashoko.
Ngwarira "zvakasikwa", "100% eco" uye "bi(o)". Kana chigadzirwa chacho chichiratidzira aya marudzi ezvichemo uye zvisingaenderane nazvo netsananguro ine udzame, nyumwira. Kana chigadzirwa chiri organic zvechokwadi, hachizeze kupa ruzivo rwakadzama uye rwakajeka pane izvo zvinosanganisa uye nzira dzekugadzira.
Dzivisa mutauro usina kujeka. Imwe nzira yakajairika ndeye kuunza mazwi kana mazwi anonongedza kune inoenderera kana mabhenefiti ezvakatipoteredza asi pasina pfungwa yakajeka kana hwaro.
Usarega ruvara ruchikunyengera iwe: Kukwidza kune zvakasvibirira pamavara avo kwakajairika mumakambani ayo anoda kukupwisa nezvehukama hwavo nekuchengetedzeka uye kutarisira zvakatipoteredza. Zvechokwadi, nokuti chigadzirwa chinoshandisa ruvara rwakasvibirira iwe haufaniri kufunga zvino kuti pane kunyengera, asi kuti hazvina kukwana kuzvisarudza.
Kwete yekutsigira green cause Yakasvibira. Uye hazvina kukwana kuti kambani iri kutsigira sangano rinorwira nharaunda kuti rivimbise kuti chigadzirwa chekambani kana hurongwa hwekugadzira ndizvo.
Kana mazano makuru angozivikanwa, nzira yakanakisisa yekudzivisa kuwira mukunyengera ndeye verenga zvinyorwa zvakanyatsonaka uye patsanura kuumbwa kwechigadzirwa. Zvakadini kana ruzivo rwatiri kutsvaga rusiri pazita? Ipapo iwe unogona kuzvitsvaga pane yavo webhusaiti. Iva anonyumwira kana isipo futi; kushaikwa kweruzivo rwakajeka uye rwakarurama kazhinji chikonzero chekuchenjerera.
Paunenge uchiverenga zvinyorwa zvichabatsira zvikuru kuziva chechitatu bato zvitupa kusabatanidzwa. Hazvisi zvese zvitambi zvine kukosha kwakafanana; tsvaga izvo zvinopa vimbiso padanho reSpanish neEuropean. Takatotaura muBhezia nezvenyaya iyi textile certification uye tinovimbisa kuzviita pamberi pemamwe maEcolabel ekuEurope anovimbisa kukanganisa kunokanganisa nharaunda.
Kana waona manyepo, usataure, taura! Iwe unogona kuzviita kuburikidza nesocial network, mukati mekambani imwechete uye zvechokwadi semutengi mune imwe yeayo masangano ekuchengetedza vatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Greenwashing, "girini" yekushambadzira tsika
Nzira yekudzidzisa sei mwana wako kunwa kubva mumukombe